‘सनसिटी’मा कोरोन संक्रमित भेटिए पछि बेनिशालाई तनाव ! के भन्छिन् उनि ? – Everest Pati
काठमाडौं। काठमाडौंको पेप्सीकोलामा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका दुई जनालाई कोरोना सं’क्रमण देखिएपछि अपार्टमेन्टमा बस्ने ५१० परिवार तनावमा छ । जसमध्ये एक हुन् नायिका बेनिशा हमाल । बेनिशा सनसिटी अपार्टमेन्टको ‘ब्लक जे’ मा आफ्नो परिवारसहित बस्छिन्।
अपार्टमेन्टभित्रै संक्रमण देखिएपछि त्राश उत्पन्न भएको छ । संक्रमित परिवार र बेनिशा बस्ने ब्लग फरक हो । तर, नजिकै बस्ने भएकाले डर त लाग्ने नै भयो । अपार्टमेन्टभित्रका सबैले सामान किन्ने पसलहरु लगभग एउटै भएकाले पनि जोखिम छ नै । बेनिशा भन्छिन्, ‘अपार्टमेन्टको नजिक थोरै मात्र पसलहरु छन् । त्यसैले त्यहाँ चाहीँ डर लागेको छ।’
अहिले अपार्टमेन्टलाई पूर्णरुपमा ‘सिल’ गरिएको छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने हरेकको कोरोना टेस्ट गर्ने तयारी छ ।बेनिशा भन्छिन्, ‘यहाँ त अहिले कोही बाहिर निस्किनु भएको छैन । तल प्रहरीहरु बस्नुभएको छ । अरु बाहिर कोही देखिएका छैनन्।’
बेनिशा पहिला–पहिला छतमा उक्लेर व्यायाम गर्ने गर्थिन् । अहिले त त्यो बन्द गरिएको छ । पहिला भन्दा अब झनै सतर्क हुनुपर्ने समय आएको बेनिशा बताउँछिन् । अब कोठाबाट बाहिरै ननिस्किने उनको योजना छ । केही समयका लागि पुग्ने खाद्यान्न भएकाले बाहिर ननिस्की नहुने पनि केही छैन।
उनी भन्छिन्, ‘हामीले हिजो नै खाद्यान्नका सामानहरु ल्याएका छौँ । केही समयको लागि हामीलाई समस्या छैन । तर, खाना सकियो नै भने पनि तातोपानीमा नुन हालेर खाएर बस्छु, तर बाहिर नजाने बताएका छन्।’
म र मेरो परिवार सुरक्षित छौ |हजुरहरुले देखाउनु भएको माया, सद्भाब र चिन्ताको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु🙏घरमै बसि लकडाउनको पुर्ण पालना गरौ.#qurantined
Posted by Benisha Hamal on Tuesday, April 14, 2020